Sarobidy ity mpanolotra televiziona tanora ity, tsara tarehy sy marevaka mba hiseho amin'ny fahitalavitra na amin'ny pejin'ny glossy magazay ao amin'ny akanjo maoderina vaovao, satria efa nanonofy ny famitana ny akanjon'izy ireo amin'ny zavatra mitovy amin'izany ireo tovovavy. Mazava ho azy, momba an'i Xenia Borodina, izay, angamba tsy fantany akory, dia lasa lamaody iray ho an'ny zatovovavy. Momba ny akanjo amin'ny tsipika toy ny Xenia Borodina, miaraka amin'ny fiandohan'ny fahavaratra, maro ireo fingotra no nanomboka nanonofy, nanaraka ny sarin'ny olo-malaza iray.
Miakanjo amin'ny korontana Borodina - nofinofy amin'ny vehivavy lamaody
Noho izany, ny akanjo marevaka ao Borodino dia mijery tsotra sy maotina. Ny zava-miafina amin'ny fahombiazany, raha ny tena marina, dia izao:
fomba fanao tsara - silhouette sy kiraro maingoka be dia be izay tsy mifanaraka afa-tsy ny tompon'ireo tarehimarika kely, fa ny ankizivavy manana endrika ihany koa;
Nipetaka ambany ny tendron-dàlam-bolo lehibe iray mahatonga ny akanjony ho malefaka sy am-pitiavana;
Ny fahombiazana, ny tsy fisitrihana ary ny famafazana marina amin'izao fotoana izao dia mamela anao hanandrana ireo fitaovana izay tsy mifanaraka amin'ny loko, fa kosa mifanohitra amin'izany. Ohatra, ny sary dia hamirapiratra sy hikiakiaka rehefa mametraka kiraro mena midorehitra ianao ary mandray kapila mena. Raha te-hijery malefaka sy malefaka ianao, ny fashionistana dia afaka misafidy kiraro fotsy fotsy, kitapo mareva-doko na kitapo fotsy.
Ity satroka boribory nataon'i Borodina ity dia azo ampiasaina ho an'ny dian-tongotra sy ny asa, saingy tena mahomby amin'ny fijerena toeram-ponenana an-dranomasina eo amin'ny famolahana jiro fotsy sy tendrombohitra.
Ksenia Borodina dia mpandehandeha ho an'ny maro
Ny akanjo rehetra an'ny Xenia Borodina dia mifanandrify amin'ny tsirony ary mifanena amin'ny fironana lamaody farany. Ao amin'ny modely sasany, misy tsikirikira sy kanto, etsy sy eroa - ny fahatanterahana sy ny fahatsoram-po. Ny akanjo, izay anehoan'ny mpanolotra fahitalavitra amin'ny takarivan'ny hariva, dia afaka manao fifaninanana mendrika ho an'ireo akanjo malaza Hollywood malaza. Ao amin'io fanangonana ny akanjo Borodina io dia misy safidy izay afaka manome alàlana ny fashionista rehetra. Xenia dia miezaka ny ho hafa amin'ny sary tsirairay, mieritreritra izany amin'ny antsipiriany kely indrindra, mifidy akanjo sy volo mety.
Ao amin'ny Xenia Borodina ao amin'ny "arsenal" dia lamaody fanao amin'ny mpanamboatra malaza marobe izay manontany matetika ny kintana mba ho modely amin'ny fanangonana vaovao.
Rihanna amin'ny akanjo mangarahara 2014
Olivia Wilde - saripika sary
25 tena mahagaga izay anangonan'ny olona
Fivarotam-pokonolona - inona no atao hoe fantsona fampisehoana natoraly amin'ny tambajotra sosialy?
Ny hormones amin'ny tiroida - inona no tokony ho fantatry ny vehivavy?
Ny zava-maniry vaovao Zyvanshi 2015
Janice Dickinson dia manana homamiadana
Kylie Minogue sy Joshua Sass dia nanohitra ny tsaho momba ny fisarahana indray tany Londres
Ahoana no hametrahana ireo mandanjalanja ao an-trano?
Fandefasana efitrano fandroana
Ny sakafo amin'ny pancreatitis - inona no tsy azo hanina?
Lamina rindrina fantsom-batana
IVF amin'ny fiatoana voajanahary
Fifandraisana mivelatra amin'ny gaza amin'ny tananao